Kraton Palace, Yogyakarta पैलेस, केराटोन याग्याकार्ता - जावा
ठेगाना: जलन रोटोविजाना ब्लक नम्बर 1, पनामामा, क्रोटन, कोटा याग्याकार्टा, दाराह इस्टिमवा याग्याकार्ता, इन्डोनेशिया
फोन: +62 622 74373721
इंडोनेशिया शहरी याग्याकार्ता को दिल मा क्राटोन (पैलेस ऑफ याग्याकार्टा वा केराटोन याग्यागार्टा) को महल हो, यस क्षेत्र को मुख्य आकर्षण को रूप मा मानिन्छ। यो एक ऐतिहासिक संरचना हो, जसमा सुल्तान अझै पनि आफ्नो परिवार र संगसंगै संग एक साथ रहन्छ।
योगकाकार्टा जावाको दक्षिण-पूर्वी भागमा स्थित छ, र यो देशको सबैभन्दा पुरानो सांस्कृतिक केन्द्रलाई सही रूपमा मानिन्छ। महल जटिल क्रटोन निर्माण गर्न प्रिन्स म्याङ्कुबुमीको आदेशबाट 1755 मा यहाँ सुरु भयो। पहिलो भवन दुईवटा नदीहरू बीच बनीन वनको पहाडमा बनाइएको थियो। भवन निर्माण गर्न सम्भावित बाढीबाट यो आदर्श स्थान हो।
केही वर्षपछि, विभिन्न परिसर भवनमा थपिएको थियो: पोलिस र घरहरू। महल एक प्रभावशाली किला पर्खाल घिमिरे 1.5 किलोमिटर लामो छ। यो धेरै वर्षको लागि निर्माण गरिएको थियो, र अन्ततः यो 1785 मा तयार भएको थियो।
1812 मा योगकाकार्टाले ब्रिटिशलाई आक्रमण गरे, जसलाई लगभग पूर्ण रूपमा शाही महल क्रटोन नष्ट गर्यो। ल्यान्डमार्कको पुनर्निर्माण गर्न सुल्तान खामेनकुबुभोनो आठवें आदेशमा XX शताब्दीको 20-ईन्डमा मात्र सुरु भयो। 2006 मा, भवन फेरि क्षतिग्रस्त भएको थियो, यस पटक भूकम्पबाट। हामीले यसलाई तुरुन्तै पुनर्स्थापित गरौं।
Kraton पैलेस हाम्रो ग्रहमा अन्तिम स्थानबाट समान भवनहरूमा टाढा छ। परिसर को एक प्रभावशाली क्षेत्र र विभिन्न वास्तुकला शैलियों संग धेरै भवनहरु को विशेषता हो। उहाँ पनि महिमा र धनद्वारा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ।
मूलतः, इमारत पारंपरिक जाव शैली मा सजाइयो थियो, तर उन्नीसवीं शताब्दी मा सजावट को आंशिक रूप देखि यूरोपीय मा परिवर्तित भयो। यहाँ त्यहाँ एक इटालियन संगमरमर र कास्ट आयरन स्तम्भहरू, पाण्डुलर र रोकोको शैलीमा बनाइएको फर्नीचर थियो।
आज, महल परिसर क्रटोन शहरमा एक शहर हो। यसको लगभग 25,000 बासिन्दा छन्। पसलहरू र सडकहरू, वर्गहरू र मस्जिदहरू, पसलहरू र मूर्तिहरू, हतियार कार्यशालाहरू र एक संग्रहालय, नृत्य र सङ्गीतको लागि एक मनोरञ्जन छन्।
Kraton Palace को प्रवेश द्वार को सामने र एक प्राचीन दास संग शुरू हुन्छ। भ्रमणको बेला, दर्शकहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ:
एक शानदार सिंहासन कोठा;
सलमानको रियालिया र मूल्यहरूको भण्डार;
स्वागत को लागि hall;
ग्यालरी संग चित्रहरु र राजकुमारहरुको चित्रहरु;
महल मा अधिकांश भवनहरु क्यानोइज संग ग्राउंड हो, जो धनी तरिका देखि विस्तृत पैटर्न संग सजाइयो। त्यस्ता छतहरूले सुनको साथ सजाएका स्तम्भहरूमा निर्भर गर्दछ। फर्श पनि एक विशेष तरिकामा राखिएको छ, त्यसैले तिनीहरू मात्र गर्मी नगर्ने, तर उनीहरूको खुट्टा पनि ठोक्छन्। यी कोठाहरू न केवल अतिथिहरू मात्र, तर क्रान्टनका बासिन्दा पनि।
पर्यटकलाई सबै कोठाहरूमा अनुमति छैन। यहाँ त्यहाँ केही नियमहरू छन्, उदाहरणका लागि, तपाईं मेजबानका महिला र निजी कोठाहरू फोटो खिच्न सक्नुहुन्न। Craton को महल मा तिनीहरू चिच्याउने र आफ्नो बासिन्दाहरूको शान्तिलाई बाधा नगर्ने सोध्छन्।
प्रवेश को सामने एक ठूलो थिएटर क्षेत्र छ, जहां आगंतुकों को पारंपरिक नृत्य र गीतहरु को रूप मा प्रदर्शन गरिन्छ। साथै तपाईं एक प्रदर्शन देखाइनेछ, जुन एक राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा (gamelan) संग छ, पट्टे वाला यंत्र संग शामिल छ। दर्शकहरूको सुविधाको लागि यहाँ विशेष कुर्सियां ​​स्थापित गरिएको छ।
Kraton पैलेस ऐतिहासिक केन्द्रमा स्थित छ, त्यसैले यो प्राप्त गर्न गाह्रो हुने छैन। यो परिसर शहरी भ्रमणको भाग हो। यहाँ तपाईं जेएल स्ट्रीट सँग हिड्न सक्नुहुन्छ। मेयर सूर्योरोमोमो वा बसहरू जसले निर्देशनहरू पालना गर्दछ:
प्रैक्ट II II यज्ञकोर्टा सोलो बालापन;
Prambanan एक्सप्रेस (प्रमेक्स) कोटारोजो एकल बेलापान।
रोम भनिन्छ Lempuyangan स्टेशन।
अल्मिमिस्ट र जागीरहरूको संग्रहालय
खरानीमा कति कार्बोहाइड्रेट छन्?
2013 को शताब्दीमा कुन कोट फैशनेबल छ?
डेभिड बेकहमले इन्टरनेटमा आफ्नो जन्मदिनमा विक्टोरियालाई बधाई दिए
प्रेसको लागि पट्टीमा अभ्यास गर्दछ
घर मा त्रिकोणीय तंत्रिका उपचार
Asthenozoospermia - रोग को सबै डिग्री को उपचार
बाकवाटमा के राखिएको छ?
धनी - उपयोगी गुणहरू
कसरी जियोक्रिकेटर छनौट गर्ने - मैले किन खरिद गर्नु पर्छ?
अनुहारमा सेतो हेराइ - कसरी छुटकारा पाउनु हुन्छ?
घरपरिवार मानिसहरू जस्तै हेर्ने सबै भन्दा धनी मानिसहरू
रूखमा महसुस गरेको रूस्टर
दृश्य मेमोरी कसरी विकास गर्ने?
असामान्य फर्नीचर सफा गर्ने उपाय
वजन घटानेका लागि "बम" कैप्सूल
कपडामा फ्रांसीसी शैली